10 Waddan Oo Khubarada Adduunku Saadaalisay In Mustaqbalka Dhaw Laga Waayi Doono Khariidadda Adduunka | FooreNews
Home Barnaamijo 10 Waddan Oo Khubarada Adduunku Saadaalisay In Mustaqbalka Dhaw Laga Waayi Doono Khariidadda Adduunka
10 Waddan Oo Khubarada Adduunku Saadaalisay In Mustaqbalka Dhaw Laga Waayi Doono Khariidadda Adduunka
FoorenewsNov 26, 2015Barnaamijo, Sheekooyin, wararka0
Inkasta oo in badan dadku aaminsan yahay in dawladaha adduunku yihiin kuwo sugan oo sii waaraya oo aan adduunka sinaba uga masaxmayn ama looga waayeyn haddana waxa ay taariikhdu inna bartay quruumo dhan iyo dawlado hore oo caan ahaa oo aan maanta ka mid ahayn khariiradda amma maabka adduunka si kasta iyo xaalad kasta oo ay uga tirmeen. Xaaladaha siyaasadeed iyo is baddalka juquraafi ee dhulka ku yimaadda ayaa sababta koowaad ah in dalal hore loo yaqaanay aanay maanta cidina aqoon meel ay ku dambeeyeen si kasta oo ay u baaba’een. Machad ku yaalla Faransiiska oo si gaar ah u daraaseeya arrimahan oo warbixin uu soo saaray dhawaan ku taxay liiska 10 waddan ama goobood oo adduunka ku yaalla oo la iska qaatay in ay dhawaan ka bixi doonaan dhegaha dadka ama si kale haddii aan u dhigno lagaba waayi doono gabi ahaan khariidada (Map) adduunka. Khubaradani waxa ay inna leeyihiin waxa ay taariikhdu inna bartay dawlado hore loo yaqaanay oo aan maanta jirin iyaga oo tusaale u soo qaatay dawladdii Cismaaniyiinta, Midawgii Soofiyeeti, Jarmalkii Bari iyo xattaa Dawladda Falastiin oo qarka u saran maanta in ay dhammaan ku baaba’do gacanta Yuhuudda dhul-ballaadhsiga wadda.
10-Ka Dawladood Ama Goobood Ee La Saadaaliyey In Dunida Laga Waayi Doono Qarniga 21-aad:
Daraasaddan waxa lagu ogaaday in dawladda Falastiin ugu horrayso liiskan kadib markii qiimayn lagu sameeyey dhulkeeda tan iyo 1947-kii illaa maanta 2015, is badalka weyn ee ku yimid iyo sida Yuhuuddu isugu fidisay ee ay maalin walba qaybo badan oo dhulka Falastiin ah ula wareegayaan lana dejinayo dad la deegaameeyey oo Yuhuud ah. Inkasta oo aanay dawlad ahaan dalalka adduunka ee waaweyni dawladnimo buuxda u aqoonsanayn Falastiin hadana xaqii reer Falastiin iyo dhulkoodiiba waxa uu qarka u saaran yahay in gabi ahaanba dunida laga waayo. Xubin ayay Falastiin ka tahay qaramada Midoobay haddana ma laha cod. Faashilka dawladda Maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabbaas, iyo xaaladaha bariga dhexe sida dhibaatada Daacish, Ciraaq iyo Suuriya ayaa dunida ka mashquuliyey Falastiin waxaanay noqotay dal la ilaaway isagoo siyaasad ahaan iyo dhul ahaanba waddankani noqday mid dhibaato weyni haysato. 80% dhulkii reer Falastiin ee 1947-kii waxa maanta la wareegtay Yuhuudda. Is barbar dhig khariidadda Falastiin ee 1947-kii iyo maanta 2015.
2. Imaaradda Sealand
Ma Aha waddan cidi taqaano. Waa Jasiirad yar oo ahaan jiray waddan. Waxa saamayn weyn ku yeeshay dagaaladoo dhex maray Ingiriiska iyo Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee dunida. Waxa ay u dhaw dahay kanaalka Biyaha Ingiriiska. Ciidamada Ingiriiska ayaa jasiiraddan yar ku wareejiyey gidaar sibidh ah waxaanu ka dhigtay saldhig Milatari. Ma aha waddan adduunku aqoonsan yahay balse waxa uu qarniyadii hore ahaan jiray waddan dal iyo dadba leh. Waxa maamula amiir Bats, waana dal yar oo jasiirad ah oo ay ku soo dhuuntaan budhcad badeedda qaaradda Yurub maraakiibta iyo doonyaha ku dhacaa. 1987-kii ayay qaramada Midoobay u aqoonsatay dal aan haysan Ictiraaf balse jira oo maamulkiisa leh, waxaana la saadaaliyey in uu gabi ahaanba dhawaan adduunka ka masaxmi doono iyada oo Jarmalka iyo Ingiriisku aad u danaynayaan in la baabi’iyo jasiiraddan.
Jasiiradda Haiti waxa ay dhibaato weyni ka haysataa isir sifayn lagu hayo dadkeeda iyada oo sannadihii aan soo dhaafnay si weyn dadka reer Haiti u noqdeen kuwo la laayay, kuwo u qaxay dalalka Woqooyiga Ameerika iyo waliba Jasiiradda kale ee ay jaarka yihiin ee Dominican. Sidoo kale xaaladda saboolnimo ee aadka u daran ee dadka reer Haiti ku sugan yihiin ayaa keentay in dadka wadankaasi dibadaha u tahriibaan. Sidoo kale waxa jasiiradda Haiti waxyeelooyin xidhiidh ah ku haya dhibaatooyinka dhinaca dabeecadda sida Duufaano, Dhul-gariiro, Fulkaanooyin iyo kor u kac ku yimid heerka biyaha badda oo keenay in dhul dhan oo Haiti ah oo hore u ahaan jiray Berri la degan yahay uu maanta noqday bad. Is badalka cimilada adduunka iyo is baddal si gaar ah dalkaasi u haysta oo xagga deegaanka ah ayaaa sababta koowaad u ah in dalkaasi dhawaan baaba’o. ………La Soco
Previous Post26-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray? Next PostDood Ka Dhalatay Ammaantii Xildhibaan Obama U Jeediyay Wasiir Samsam, Kharashkii Ay Ka Caawisay Iyo Wasaaraddaha Karbaashku Ku Dhacay